Mmetụta ihe mgbochi A Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ N'uzo SEO
A na-ebipụta ihe karịrị nde abụọ blog posts kwa ụbọchị. Ya mere, ọ gaghị ekwe gị omume ịlanarị na ịntanetị ma ọ bụrụ na i nyeghị ndị ọbịa gị ihe ndị dị mma iji gụọ. Oliver King, onye Semalt Onye ahịa na-ahụ maka ndị ahịa, na-ekwu na ị nwere ike ime ka blog gị nwee ọganihu nanị mgbe e dere isiokwu gị nke ọma ma nwee ọtụtụ ozi. Ndị na-ede blọgụ dị iche iche amaghị ihe ọ bụla banyere SEO. Na ụwa ebe ihe karịrị pasent 80 nke ihe omumu weebụ na-amalite na search engine s, igosi n'elu peeji mbụ nke Google ga-ekwe omume nanị ma ọ bụrụ na ị mere SEO n'ụzọ kwesịrị ekwesị - network support technician in Portland.
Gịnị bụ SEO?
Nyochacha njinarụ bụ nchịkọta nke gụnyere usoro na ụzọ iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị anya na nsonaazụ ọchụchọ. A na-akwụ ụgwọ ndị a ma ọ bụ na-akwụghị ụgwọ ma hụ na ịtụkwasị obi na nhụwapụta nke saịtị gị n'ime ọnwa ole na ole. SEO ma ọ bụ nyochaa njikwa search bụ maka ịchọta ebe nrụọrụ gị na ọdịnaya ya ka engines na-enyocha ya iji gosipụta na nchọta ha. Ọ dị mkpa ime SEO ka engines na-enyocha nwere ike inye ọkwa dị mma na saịtị gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịdeela otu edemede gbasara otu esi akwadebe ihe ọ bụla, ịchọrọ ịchọta engines iji gosi ya onye ọ bụla nke na-achọ okwu "noodles" na "ntụziaka nchịkwa." Site na njikarịcha nchọgharị, ọ ga-ekwe omume ịmepụta isiokwu gị ma nweta ọtụtụ okporo ụzọ.
Ugbu a, ajụjụ a bụ otú usoro ọchụchọ ga-esi kwadebe isiokwu gị ma ọ bụ weebụsaịtị gị. Nzọụkwụ mbụ bụ iji bulite saịtị gị maka nsonaazụ ọchụchọ Google Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ego na ntanetị, ị ga-ede akwụkwọ ozi ọma ma tinye isiokwu dị mkpa na ha. Ọzọkwa, ị ga-ejikọta isiokwu gị, nyochaa ngwaahịa ma ọ bụ ozi ederede na ibe ndi ozo nke a na-ahu anya na nchọta nke Google.
White okpu vs. Black okpu
Tupu ịmalite SEO, ọ dị mkpa ịmara ọdịiche dị n'etiti okpu ọcha (SE) na nwa ojii SEO . Ọ dị mma ịsị na njikwa njikwa search engine bụ onye na-agbanwe egwuregwu, ma ị ga-anakwere ụdị usoro ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọkwa dị mma maka saịtị gị maka ogologo oge, ị ghaghị iji akara ọcha chaa SEO ma na-elekwasị anya na ịchọta ọdịnaya gị naanị maka engines ọchụchọ. White hat SEO bụ ụzọ eji wuo azụmahịa n'ịntanetị, ebe nwa ojii SEO bụ usoro iwu na-akwadoghị nke ga - ebibi ụlọ ọrụ gị n'oge na - adịghị anya na nsonaazụ ọchụchọ.
SEO na peeji nke gụnyere itinye isiokwu, ide ihe mkpado meta, nkọwa nke atọ ma bulie ọdịnaya gị na isiokwu maka nsonaazụ ọchụchọ. Onodu-ibe SEO bụ mgbe ị na-ewu njikọ nke saịtị gị site na posts ndị ọbịa, nweta ihe ụfọdụ na ibe gị, ma tinye ndị na-agụ site na netwọk mgbasa ozi.
N'ikpeazụ, m ga-achọ ikwu na ị ghaghị ide ọdịnaya dị mma ma zere iṅomi ọrụ ndị ọzọ. Nke a agaghị enye gị ihe ndị a chọrọ, na engines ndị na-eme nchọpụta ga-eme ka ndị na-enweghị mmasị na ebe nrụọrụ weebụ gị dị anya. O nwere ike ọ gaghị ekwe omume iji bulie ọdịnaya gị mfe; ị ghaghị ịmepụta profaịlụ mgbasa ozi ọha na eze iji dọta ọtụtụ ndị ọzọ na iji melite arụmọrụ nke saịtị gị.